Guqula ama-PDF akho abe yiSelula, iWebhu ekulungele ukuSebenziseka, Ukubambisana okungabiwa | Martech Zone
Cishe wonke umuntu unamacala okusebenzisa, amaphepha amhlophe namasheya okuthengisa ngefomethi ye-PDF. Ngenkathi amadivayisi amaningi enabafundi be-PDF kulezi zinsuku, labo bafundi abenzelwe ukufundwa kuwo wonke amadivayisi ngamandla okuwabelana ngawo emphakathini noma ukuwashumeka ngqo kokuqukethwe kwakho.
Incwajana elula inikeza uhlelo lokusebenza olulula lapho ungalayisha khona futhi ubambe izincwajana yenziwe ngama-PDF wakho noma yakhelwe kusuka ekuqaleni. Izincwajana zingathunyelwa, ziphinwe, zithunyelwe ku-tweet, zabelwe, zithunyelwe nge-imeyili, zishumekwe futhi zilandwe ngamakhasimende noma yikuphi. Unganikeza futhi ngezixhumanisi zamakhasi okufika wokubanjwa kokuhola.
Sebenzisa isixhumanisi sethu sokuxhumana futhi ungathola I-55% OFF yokubhaliselwe konyaka ongu-1 we-SimpleBooklet HERO Plan.
Nayi ividiyo yokubuka konke ye- Incwajana elula:
Bheka igalari ivuliwe I-Simplebooklet's isayithi ukubona izibonelo ezinhle zokuthi abathengisi basebenzisa kanjani ipulatifomu. Ungazama ipulatifomu mahhala. Qiniseka ukuthi usebenzisa isixhumanisi sethu sokuxhumana futhi ungathola I-55% OFF yokubhaliselwe konyaka ongu-1 we-SimpleBooklet HERO Plan.
Tags: guqula i-pdfpdf ephathekayoamashidi okuthengisai-pdf engabiwaincwajana elulasebenzisa amacalawhitepapers